23 Job wee zaa, sị: 2 “Ọbụna taa nchegbu m na-enwe+ bụ nnupụisi;Aka m dị arọ n’ihi ịsụ ude m. 3 A sị nnọọ na m maara ebe m nwere ike ịhụ ya!+M ga-aga n’ebe ya e wusiri ike.+ 4 M ga-ewere okwu ikpe bịa n’ihu ya,M ga-ejikwa ọnụ m zaa ọtụtụ ihe; 5 M ga-ama ihe ọ ga-asa m,M ga-echebakwara ihe ọ ga-agwa m echiche.+ 6 Ọ̀ ga-eji ike ya dị ukwuu lụso m ọgụ?Mbanụ! N’ezie, ọ ga-aṅa m ntị.+ 7 N’ebe ahụ, onye ziri ezi ga-aga ka ya na ya dozie okwu,Ruokwa mgbe ebighị ebi, onyeikpe m ga-asị na ikpe amaghị m. 8 Lee! M ga-aga n’ebe ọwụwa anyanwụ, ma ọ gaghị anọ n’ebe ahụ;M ga-alaghachikwa azụ, ma apụghị m ịmata na ọ bụ ya;+ 9 M ga-aga n’aka ekpe ebe ọ na-arụ ọrụ, ma apụghị m ịhụ ya;Ọ na-atụgharị gaa n’aka nri, ma adịghị m ahụ ya. 10 N’ihi na ọ maara nke ọma ụzọ m na-esi aga.+Mgbe ọ nụchasịrị m, m ga-adịzi ka ọlaedo.+ 11 Ụkwụ m agbasowo nzọụkwụ ya;Ụzọ ya ka m gbasoworo, adịghịkwa m ahapụ ya.+ 12 Adịghị m ahapụ ihe egbugbere ọnụ ya nyere n’iwu.+Echekwawo m okwu si ya n’ọnụ+ karịa ihe a chọrọ m n’aka. 13 Ọ dịghị enwe obi abụọ, ònyekwa pụrụ iguzogide ya?+Ọ dị ihe na-agụ mkpụrụ obi ya agụụ, ọ ga-emekwa ya.+ 14 N’ihi na ọ ga-emezucha ihe a kara aka maka m,+Ihe ndị dị otú a dị ọtụtụ n’uche ya. 15 Ọ bụ ya mere m ji na-ama jijiji n’ihi ya;Ana m aṅa ntị, ụjọ ya na-atụkwa m.+ 16 Chineke emewo ka obi na-alọ m mmiri,+Onye Pụrụ Ime Ihe Niile emewokwa ka obi koro m n’elu.+ 17 N’ihi na e meghị ka m dere duu n’ihi ọchịchịrị,Ma ọ bụkwanụ n’ihi na itiri agbachiwo m ihu.